Global Voices teny Malagasy » Rosia: Olombelona Koa i Kadyrov · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Avrily 2018 6:27 GMT 1	 · Mpanoratra Veronica Khokhlova Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Fahalalahàna miteny, Fitantanam-pitondrana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Septambra 2006)
Ny 5 Oktobra lasa teo, feno 30 taona i Ramzan Kadyrov  Praiminisitra, taona eken'ny lalàna ho hahalasa azy ho filoham-pirenena. Na dia nandà ho tsy nikatsaka io toerana ambony indrindra io aza izy , ireo olona sasantsany mino fa tsy ho ela dia ho tonga eo izy.
Timur Aliev ( timur_aliev mpampiasa LJ ), lehiben'ny toniandahatsoratra ao amin'ny gazety Chechen Society mpiseho isan-kerinandro (printy sy aterineto), no nandinika (Rosiana) ny tsy maintsy tsapa rehefa hoe matanjaka toa an'i Kadyrov , ao anaty firenena iray feno olona sahirana. Ao anatin'io fampidirana io ihany, zarain’ i timur_aliev ihany koa ireo fomba fijeriny ny toerana misy ny asa fanaovana gazety ao Tsetsenia.
Golden Pen (Penina Volamena) tao Tsetsenia
Nandany tapak'andro aho androany tao amin'ny Efitrano Malalaka Ramzan tao Gudernes, nandritra ny fanolorana ireo loka ho an'ireo mpanao gazety nandefa ny tantarany tany amin'ny fifaninanana Golden Pen. Ny [Akhmad Kadyrov ] Fund no nikarakara ny hetsika.
Avy amin'izay hitako, lohahevitra roa no mila nojerena
1. Ny [lohateny Tsara Indrindra an'ny Mpanao Gazety] – ny Loka Goavana tamin'ilay fifaninanana, raha ho lazana – dia natolotra ho an'ireo zalahy izay miasa ao amin'ny [hery fiarovana], mandeha any amin'ireo famonjàna isankarazany sy ireo raharaha hafa, ary tsy tapaka maka sary an'io amin'ny fakantsary.
Noho izany misy fanontaniana iray manao hoe: rahoviana ny mpitandro ny filaminana iray izay maka sary ny asany no antsoina hoe mpanao gazety tsara indrindra – toetra manokan'ny repoblika ve izany sa itarafana ireo firehana ankehitriny (bilqogerq mpanao gazety sy ny sisa)?
2. Nony tapitra ny lanonana, nosakanana vehivavy iray tao ivelany aho: nagatahany aho mba hanampy azy hiresaka amin'i Ramzan Kadyrov. Niresaka tamim-panajàna be tamiko izy, nanaja ahy sahala amin'ny fanajàny mahazatra an'ireo zokiolona, nefa ohatran'ny mbola zokiko izy.
Nolazainy ahy ny mikasika ny vadiny kilemaina, ny zanany marary sy ny tsy fananany vola hividianana izay kely indrindra tokony ho ilaina.
Nohazavainay azy fa tsy manan-draharaha na kely akory aza iarahana amin'i Ramzan izahay ary tsaratsara kokoa raha miresaka amin'ny sampana mpifandray amin'ny gazetiny izy – tsy lavitra teo ireo olony. Lasa izy.
Ary nahatonga saina ahy izany – iray amin'ireo marobe izay nanao fahirano an'i Ramzan niaraka tamin'ireo fangatahany izy. Misy laharana iray tsy miova misy an'ireo “mpangataka” miandry azy, ary tsy mangataka hanao sonia an'ireo taratasy tsy dia manan-danja loatra izy ireo, fa miandry ireo fanapahan-kevitra izay mety hisy fiantraikany amin'ny tohin'ny fiainan-dry zareo.
Ahoana no hanovàn'io ny toetsaina sy ny fitondrantenan'ny olona iray izay andrandraina hanova ny hoavin'ireo olona anjatonjatony?
Tsapan'ny lery ve ny fahorian'izy ireo, efa manomboka miara-mangirifiry amin'izy ireo ve izy? Sa efa zatra ary manao izay fanahy mahantra rehetra ho toy ny mpangataka hafa? Sa vao aminka io hahatonga azy hahatsapa ho matanjaka tompon'ny hery rehetra?
hippy55 : Raha toa misy mpitandro filaminana iray, tsy mpitandro filaminana tsetsenina fotsiny, mandrakitra ho anaty lahatsary izay asa ataony, hanao sonia ny didm-pitsaràna hamonoana azy izy izay. Na ho very asa, farafahakeliny.
Raha vao manomboka mahatsapa ny fahorian'ny olona i Kadyrov, tsy Kadyrov intsony izy izay. […]
timur_aliev : Nahazo fiara io mpitandro filaminana io hanaovany ny asany…
Olombelona koa i Kadyrov…
Tsy mitonona anarana: Mpinomino foana… Kadyrov ve? Hahatsapa ny fahorian'ny olona?! Marary angaha ianao?
timur_aliev : Olombelona koa i Kadyrov…
jan_voskresensk : Angamba tsy ampy fandanjalanjàna ny fanontaniako ary mety tena tsy ananakop ny zo hametraka ilay izy… saingy – ahoana no fihetsikao manokana manoloana an'i Ramzan Kadyrov? Monina any Okraina aho, liana amin'ny tantaran'i Ichkeria ary tsy dia nanan fijery manokana loatra mikasika io olona io izaho sy ireo namako, izay mifampizara fahalinana sy fialamboly. Noho izany mahaliana ny mihaino olona miatrika ireny olana ireny sy [iharan’] ireo fanapahan-kevitra nataon'i Ramzan.
timur_aliev : Sarotra ny mamaly tsy mianbakavàka- Izaho dia mpanohitra azy, ary angamba izay tokoa, saingy tsy azoko atao tsinontsinona ireo zavatra tontosany…
Rehefa manana fotoana betsaka aho, hanoratra marimarina mikasika azy – indrindra indrindra manomboka miha-akaiky ny [fotoana efa voatondro] – 5 Oktobra…
jan_voskresensk : Ary inona no hiseho amin'ny 5 Oktobra? Tsy manan-kolazaina aho
timur_aliev : feno 30 taona i Ramzan
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/04/27/118454/
 Ramzan Kadyrov: http://en.wikipedia.org/wiki/Ramzan_Kadyrov
 nandà ho tsy nikatsaka io toerana ambony indrindra io aza izy: http://www.iht.com/articles/2006/07/14/news/chechen.php
 ny tsy maintsy tsapa rehefa hoe matanjaka toa an'i Kadyrov: http://timur-aliev.livejournal.com/35502.html
 Akhmad Kadyrov: http://en.wikipedia.org/wiki/Akhmad_Kadyrov